ယ ခု နှစ် အ တွင်း ကျေး ရွာ ပေါင်း ၅,၀၈၀ ခန့် လျပ်စစ်မီး ရရှိတော့မည်...! - Thadin
HomeNEWSယ ခု နှစ် အ တွင်း ကျေး ရွာ ပေါင်း ၅,၀၈၀ ခန့် လျပ်စစ်မီး ရရှိတော့မည်…!
ယ ခု နှစ် အ တွင်း ကျေး ရွာ ပေါင်း ၅,၀၈၀ ခန့် လျပ်စစ်မီး ရရှိတော့မည်…!
February 12, 2019 Kay Kay NEWS Comments Off on ယ ခု နှစ် အ တွင်း ကျေး ရွာ ပေါင်း ၅,၀၈၀ ခန့် လျပ်စစ်မီး ရရှိတော့မည်…!
ကမ္ဘာဘဏ် အကူအညီ ဖြင့် အကောင်အထည် ဖေါ်နေသော အမျိုးသား လျပ်စစ်ဓါတ်အား ရရှိရေး စီမံကိန်း NEP ၏ အစီအစဉ် တစိတ်တပိုင်း အဖြစ် ယခုနှစ်တွင် ကျေးရွာပေါင်း ၅,၀၈၀ ခန့် ၂၄ နာရီ ပါတ်လုံး လျပ်စစ်မီးများ ရရှိတော့မည် ဖြစ်သည်ဟု စီမံကိန်း မန်နေဂျာ ဦးသူရ အောင်ဘိုက မြန်မာတိုင်းမ် သတင်းစာ ကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
NEP စီမံကိန်း များအတွက် ကမ္ဘာဘဏ်မှ ဒေါ်လာ သန်း ၄၀၀ လျာထားပေးခဲ့ရာ သန်း ၉၀ အား ဓါတ်အားလိုင်းများ နှင့် ဝေးကွာသည့် ကျေးရွာများ လျပ်စစ်ဓါတ်အားရရှိရေး ဆောင်ရွက်နေသည့် လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်း ၀န်ကြီးဌာနအတွက် ခွဲတမ်းချထားပေးခဲ့သည်။ ကျန်သည့် သန်း ၃၁၀ အား လျပ်စစ် နှင့် စွမ်းအင် ၀န်ကြီးဌာန ၏ ဓါတ်အားလိုင်းများ တိုးချဲ့ သွယ်တန်းရေး အတွက် အသုံးပြုသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမအဆင့် အဖြစ် လျပ်စစ် နှင့် စွမ်းအင် ဌာန၏ ဓါတ်အား လိုင်း တိုးချဲ့မှု အစီအစဉ်အရ အဆိုပါ အမျိုးသား ဓါတ်အားလိုင်းကြီး နှင့် နှစ်မိုင် ခန့် အကွာရှိ ကျေးရွားပေါင်း ၅,၀၈၀ ခန့် မီးရရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ လုပ်ငန်းများအတွက် ကုမ္ပဏီ ပေါင်း ၁၂ ခုက တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
မီးရရှိမည့် ကျေးရွာများမှာ ပဲခူးတိုင်း၊ မွန်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်း နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းတို့ ပါဝင်ကြပါတယ်။
ဒုတိယ ဆင့်အဖြစ် စစ်ကိုင်းတိုင်း။ မကွေးတိုင်း၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ် နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်များမှာ ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖေါ်သွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီနေရာ မှာ အလျင်းသင့်လို့ ပြောချင်တာက Mini-grid လို့ခေါ်တဲ့ ဘက်ထရီ အမြောက်အမြားကို ဆိုလာ နဲ့ အားသွင်းပြီး လျပ်စစ်ဓါတ်အား ဖြန့်ဖြူးတာမျိုး ကော မလုပ်ကြဖူးလား ဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်၊ အချို့ဒေသတွေမှာ လုပ်ရင်လည်း လုပ်နေနိူင်ပါတယ်။ ကီလိုဝပ် အနည်းဆုံး နှစ်ဆယ်ကျော်ရှိပြီး အိမ်တွေကို ကြိုး တွေနဲ့ သွယ်တန်းပြီး မီးပေးနိူင်ပါတယ်။ (ပုံတွင် ရှု့)
လျပ်စစ်မီးရရှိဖို့ သွယ်တန်းပေးတာမျိုးက လွယ်ကူပေမယ့် ဒီလျပ်စစ်ဓါတ်အားကို မိမိတို့ အတွက် အကျိုးရှိရာ ရှိကြောင်း၊ စီးပွား ဖြစ်ထွန်းဖို့ ဘယ်လို အသုံးချရမလဲ ဆိုတာ သိဖို့ က ခက်နေပြန်ပါတယ်။
လယ်ယာ မြေများ အတွက် ရေစုပ်စက်တွေနဲ့ ရေသွယ်ပေးနိူင်ခြင်း၊ ရောင်းချလို့ ရမယ့် ကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်နိူင်ခြင်း တို့ကို အိမ်ထောင်စုများ အနေနဲ့ လုပ်ကိုင်လာနိူင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ပုဂ္ဂလိက တွေ အနေနဲ့ Mini-grid တွေ တည်ဆောက်ဖို့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံနိူ်င်ကြပေမယ့် ပြဿနာတခု ရှိနေပြန်တာက စိုက်ထုပ်ထားတဲ့ ငွေ ပြန်ကာမိအောင် ၇ နှစ်လောက် စောင့်မှ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုတယ့်အဖြစ် နဲ့ လိုင်စင်ရဖို့၊ အစိုးရဆီက ထောက်ပံ့မှုတွေရဖို့ နဲ့ ဘယ်ဈေးနဲ့ ရောင်းချရမလဲ ဆိုတာကလည်း နိူင်ငံရေးအရ မိုင်းကွင်း တွေ ဖြစ်လာနိူင်စရာ ရှိပါတယ်။
အစိုးရ အနေနဲ့ အဆိုပါ Mini-grid များ ပုဂ္ဂလိက တွေ ပြုလုပ်နိူင်အောင် တွန်းအား ပေးသင့်ပြီး အဆိုပါ ဒေသများ အတွက် ဓါတ်အား သွယ်တန်းပေးမှုအား အလောသုံးဆယ် လုပ်စရာ မလိုတော့ပဲ အခြား တဖက်ကို လှည့်နိူင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အစိုးရ ဓါတ်အားပေးလိုင်းများ မကြာမီ ရောက်လာဖို့ ရှိနေရင် လည်း ရင်းနှီးမြုပ်နှံတဲ့ လူတွေ ထိခိုက်သွားနိူင်ပြန်တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုနှဈအတှငျး ကြေးရှာပေါငျး ၅,၀၈၀ ခနျ့ လပျြစဈမီး ရရှိတော့မညျ
ကမ်ဘာဘဏျ အကူအညီ ဖွငျ့ အကောငျအထညျ ဖျေါနသေော အမြိုးသား လပျြစဈဓါတျအား ရရှိရေး စီမံကိနျး NEP ၏ အစီအစဉျ တစိတျတပိုငျး အဖွဈ ယခုနှဈတှငျ ကြေးရှာပေါငျး ၅,၀၈၀ ခနျ့ ၂၄ နာရီ ပါတျလုံး လပျြစဈမီးမြား ရရှိတော့မညျ ဖွဈသညျဟု စီမံကိနျး မနျနဂြော ဦးသူရ အောငျဘိုက မွနျမာတိုငျးမျ သတငျးစာ ကို ပွောပွခဲ့ပါတယျ။
NEP စီမံကိနျး မြားအတှကျ ကမ်ဘာဘဏျမှ ဒျေါလာ သနျး ၄၀၀ လြာထားပေးခဲ့ရာ သနျး ၉၀ အား ဓါတျအားလိုငျးမြား နှငျ့ ဝေးကှာသညျ့ ကြေးရှာမြား လပျြစဈဓါတျအားရရှိရေး ဆောငျရှကျနသေညျ့ လယျယာ စိုကျပြိုးရေး၊ မှေးမွူရေး နှငျ့ ဆညျမွောငျး ၀နျကွီးဌာနအတှကျ ခှဲတမျးခထြားပေးခဲ့သညျ။ ကနျြသညျ့ သနျး ၃၁၀ အား လပျြစဈ နှငျ့ စှမျးအငျ ၀နျကွီးဌာန ၏ ဓါတျအားလိုငျးမြား တိုးခြဲ့ သှယျတနျးရေး အတှကျ အသုံးပွုသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။
ပထမအဆငျ့ အဖွဈ လပျြစဈ နှငျ့ စှမျးအငျ ဌာန၏ ဓါတျအား လိုငျး တိုးခြဲ့မှု အစီအစဉျအရ အဆိုပါ အမြိုးသား ဓါတျအားလိုငျးကွီး နှငျ့ နှဈမိုငျ ခနျ့ အကှာရှိ ကြေးရှားပေါငျး ၅,၀၈၀ ခနျ့ မီးရရှိလာမှာ ဖွဈပါတယျ။ အဆိုပါ လုပျငနျးမြားအတှကျ ကုမ်ပဏီ ပေါငျး ၁၂ ခုက တာဝနျယူဆောငျရှကျနပွေီ ဖွဈပါတယျ။
မီးရရှိမညျ့ ကြေးရှာမြားမှာ ပဲခူးတိုငျး၊ မှနျပွညျနယျ၊ ကရငျပွညျနယျ၊ ဧရာဝတီတိုငျး၊ မန်တလေးတိုငျး နှငျ့ ရနျကုနျတိုငျးတို့ ပါဝငျကွပါတယျ။
ဒုတိယ ဆငျ့အဖွဈ စဈကိုငျးတိုငျး။ မကှေးတျိုငျး၊ ခငျြးပွညျနယျ၊ ရှမျးပွညျနယျ နှငျ့ ရခိုငျပွညျနယျမြားမှာ ဆကျလကျ အကောငျအထညျဖျေါသှားမယျလို့ ဆိုပါတယျ။
ဒီနရော မှာ အလငျြးသငျ့လို့ ပွောခငျြတာက Mini-grid လို့ချေါတဲ့ ဘကျထရီ အမွောကျအမွားကို ဆိုလာ နဲ့ အားသှငျးပွီး လပျြစဈဓါတျအား ဖွနျ့ဖွူးတာမြိုး ကော မလုပျကွဖူးလား ဆိုတာပဲ ဖွဈပါတယျ၊ အခြို့ဒသေတှမှော လုပျရငျလညျး လုပျနနေိူငျပါတယျ။ ကီလိုဝပျ အနညျးဆုံး နှဈဆယျကြျောရှိပွီး အိမျတှကေို ကွိုး တှနေဲ့ သှယျတနျးပွီး မီးပေးနိူငျပါတယျ။ (ပုံတှငျ ရှု့)
လပျြစဈမီးရရှိဖို့ သှယျတနျးပေးတာမြိုးက လှယျကူပမေယျ့ ဒီလပျြစဈဓါတျအားကို မိမိတို့ အတှကျ အကြိုးရှိရာ ရှိကွောငျး၊ စီးပှား ဖွဈထှနျးဖို့ ဘယျလို အသုံးခရြမလဲ ဆိုတာ သိဖို့ က ခကျနပွေနျပါတယျ။
လယျယာ မွမြေား အတှကျ ရစေုပျစကျတှနေဲ့ ရသှေယျပေးနိူငျခွငျး၊ ရောငျးခလြို့ ရမယျ့ ကုနျပစ်စညျးမြား ထုတျလုပျနိူငျခွငျး တို့ကို အိမျထောငျစုမြား အနနေဲ့ လုပျကိုငျလာနိူငျဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။
ပုဂ်ဂလိက တှေ အနနေဲ့ Mini-grid တှေ တညျဆောကျဖို့ ရငျးနှီးမွုပျနှံနျိူငျကွပမေယျ့ ပွဿနာတခု ရှိနပွေနျတာက စိုကျထုပျထားတဲ့ ငှေ ပွနျကာမိအောငျ ရ နှဈလောကျ စောငျ့မှ ဖွဈတယျလို့ ဆိုတယျ့အဖွဈ နဲ့ လိုငျစငျရဖို့၊ အစိုးရဆီက ထောကျပံ့မှုတှရေဖို့ နဲ့ ဘယျစြေးနဲ့ ရောငျးခရြမလဲ ဆိုတာကလညျး နိူငျငံရေးအရ မိုငျးကှငျး တှေ ဖွဈလာနိူငျစရာ ရှိပါတယျ။
အစိုးရ အနနေဲ့ အဆိုပါ Mini-grid မြား ပုဂ်ဂလိက တှေ ပွုလုပျနိူငျအောငျ တှနျးအား ပေးသငျ့ပွီး အဆိုပါ ဒသေမြား အတှကျ ဓါတျအား သှယျတနျးပေးမှုအား အလောသုံးဆယျ လုပျစရာ မလိုတော့ပဲ အခွား တဖကျကို လှညျ့နိူငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
အစိုးရ ဓါတျအားပေးလိုငျးမြား မကွာမီ ရောကျလာဖို့ ရှိနရေငျ လညျး ရငျးနှီးမွုပျနှံတဲ့ လူတှေ ထိခိုကျသှားနိူငျပွနျတာကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။
2019 ခုနှစ် (၇)ရက်သားသမီးများအတွက် (၁)နှစ်စာဟောစာတမ်း (ဆရာ​ သူရိဇ ဗေဒင်​နှင့်​လက္ခဏာ)
This Month : 33695
This Year : 175152
Total Users : 534177
Total views : 2416288